jasmine(တောင်ကြီး) January 29, 2012 at 6:27 PM
သမီးစံ January 29, 2012 at 6:33 PM
မေမြို့မိုး January 29, 2012 at 6:39 PM
သမီးစံ January 29, 2012 at 6:52 PM
ချစ်စံအိမ် January 29, 2012 at 7:35 PM
၁၀၀ ၀ယ်မလို့ တစ်ကိုယ်လုံးဖုန်းချိတ်ထားချင်လို့ပါ:P
သမီးစံ January 29, 2012 at 9:15 PM
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) January 29, 2012 at 7:28 PM
ကွင်းစကွင်းပိတ်ကြီးတောင် ပါလိုက်သေး။း(
သမီးစံ January 29, 2012 at 9:16 PM
ခရစ္စတလ် January 29, 2012 at 7:39 PM
တင်ပြအပ်ပါသည် ကြည့်အုံး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကို အမြင်ကတ်ကတ်နဲ့ ဆွဲဆိတ်ပလိုက်တယ် :P
သမီးစံ January 29, 2012 at 9:17 PM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် January 29, 2012 at 7:58 PM
အပေါ်ကတစ်ယောက် ဘာမှမမြင်ရဘူးလား မျက်မှန်မှမတပ်တာ ဘယ်မြင်ရမလဲ ဟိ
သမီးစံ January 29, 2012 at 9:19 PM
အောင်အောင် January 29, 2012 at 8:09 PM
သမီးစံ January 29, 2012 at 9:20 PM
မောင်ဘုန်း January 29, 2012 at 8:14 PM
ထင်တော့ ထင်သား ပဲ ...အဲ့ လောက်မလွယ် ဘူး လို့....
တကယ်သာ ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် ... လုပ်တဲ့ သူလည်း အကျိုးမြတ် အများကြီး ရမှာ ဖြစ်လို
ပြည်သူ တွေအနေနှင့်လည်း တော်တော် လေးအဆင်ပြေ သွားမဲ့ ကိစ္စ ပဲ နော် ...
စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုက ... ဒီလောက်ကြီးတဲ့ဈေးကွက်ကို ... သေချာတဲ့ အခြေနေ မဖြစ်သေးပဲ နဲ့ 
ဘာလို့ပြည်သူကို အသိပေးလိုက်တာလည်း မသိဘူး ....
အင်း ... ဖြစ်နိုင်ခြေ တစ်ခုတော့ တွေးမိတယ် .... ဒီ project ကို လုပ်နည်းလုပ်ဟန် အတိုင်းလုပ်မယ်
ဆိုရင် မလွယ်ဘူးလေ .... အစိုးရအနေနဲ့အခု ချမှတ်ထား ဆက်သွယ်ရေးမူ နဲ့ဥပဒေ အရဆို ရင် ဒီ project ကို
လက်ခံမို့တော် ခက်သွားမယ် ... ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် ..... လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်နေတဲ့ ကုမ္မဏီ တွေ ရှိသေးတယ်လေ ... ။ ဒီ project ကို သာလက်ခံ မယ်ဆိုမယ် ဆိုရင် အဲ့ ကုမ္မဏီ တွေ သွားပြီ ... ဒါကြောင့် ဒီ project ကိုလုပ်တဲ့ သူတွေ ဟာ လုပ်နည်း လုပ်ဟန် အတိုင်း အစိုးကို ဒီ project ကို တင်မယ် ဆိုရင် အစိုးရအနေ နဲ့လက်မခံမို့ 
၈၀% လောက်ရှိမယ်လေ ..... ။
ဒါကြောင့် သေသေချာ ကို ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြည်သူ ကို အသိခဲ့ပုံရတယ် ..... ။ project ကို အစိုးရဆီ ကို လည်းတင်ပြီး သူ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ထဲ ကနေ ပြည်သူ ကို အသိပေးလိုက်တယ်လေ .... ကြိုတွက်ထား ပြီးသားပဲလေ ပြည်သူ အားလုံး ထောက်ခံမယ်ဆို တာကိုပေါ့ .... အဲ့တော့ အစိုးရအနေနဲ့... ဒီ project ကို လက်မခံမို့၈၀% ကနေ ၅၀% ဖြစ်သွားပြီလေ ... ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ ဖိအား ဖြစ်သွား ပြီလေ .... အစိုးရအနေ နဲ့လက်မခံ ပါဘူး လို့ပြောမို့အခက်တွေ့သွားတာပေါ့ နော် .....
ဒီလို ပြည်သူတွေကို အသိပေးလိုက် တဲ့နေရာမှာ project ဆိုင်ရာ နည်ပညာ ပါ ချပြလိုက် ရင် ... ပြည်သူ အနေ နဲ့ဒီထက် ပိုပြီ ဖိအားများ လာမှာပါ ... လက်မခံ လို့မရတဲ့ နေထား တောင်ဖြစ်သွား နိုင်တယ်လို့တွေးမိပါတယ် ....
ခက်တာက ဥပဒေ ရှိတယ်လေ ... ခွင့်ပြု ချက်မရသေး ပဲ နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ ကို ပြည်သူ သိအောင် လုပ်မို့က ခက်တယ်လေ ....
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ .... ဒီ project မဖြစ်လာဘူး ဆိုရင်တောင် .... လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ ကုမ္မဏီ တွေ အနေနဲ့သူ့ တို့ဆက်လက်ရပ်တည် မို့မေးခွန်း တွေ အများကြီး ဖြစ်လာပြီ ....
နောက်တစ်ခု အစိုးရနေ နဲ့ လည်း ဒီတစ်ကြိမ် တော့ ကျင့်သုံးတဲ့ မူ အရသော်လည်းကောင်း ၊ ရှိပြီးသား ဥပဒေ အရသော် လည်းကောင်း လက်ခံ မယ် လက်မခံ ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခက် သွားလို့ငြိမ်ငြိမ် လေး နေလိုက်ပြီး မြန်မာ ဆက်သွယ်ရေး ကို ရှေ့ တွန်း လိုက်တဲ့ ... လုပ်ရက် တစ်ခု လို့တွေးမိပါတယ် .....
ဒါကြောင့် အစိုးရအနေ နှင့် ဒီတစ်ကြိမ်တော့ မသိချင်ဟန် ဆောင်လို့ရပင် မဲ့ နောက်တကြိမ် ဆိုရင် ဆိုတဲ့ အခြေကို ၇င်ဆိုင်မို့အခုလောက် ဆို ရင် လက်ရှိကျင့် သုံးနေတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနည်း ပညာ ၊ မူ နှင့် ဥပဒေ ကို တစ်ခုခု ပြောင်လည်း မို့ ကြို တင် လုပ်ဆောင် ရတော့ မှာပါ ..... ။
ဒါကြောင့် ဒီ project ဟာ လုပ်ဖြစ်သည် ဖြစ်စေ ၊ မဖြစ်ခဲ့ သည်ရှိစေ ..... မြန်မာ ပြည်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ နည်းပညာ တစ်ခုခု တော့ ပြောင်လည်း သွားမယ်လို့ တွေးပါတယ် ....
ဒီ project ဖြစ်မို့လုပ်တဲ့ သူတွေ ရဲ့ စီပွားရေး ဆိုင်ရာ အကြံပေးတဲ့ သူတွေ ရဲ့ စိတ်ကူးကို ချီးကျူးလောက်ပါတယ် ...
ဒါပင်မဲ့ ထီပေါက်ပြီး လက်မှတ် ပျောက် သွားသလို ပြည်သူတွေ အသုံးချ ခံ လိုက်ရတာပေါ့ ..... ... အဟီး ....
အပျိုကြီးရေ .... လွဲကုန်ပြီလားတော့ သိဘူး ... စိတ်ထဲတွေး မိတာလေး တွေ ရေးမိပြန်ပြီ ......
သမီးစံ January 29, 2012 at 9:22 PM
myatkyi January 29, 2012 at 8:14 PM
အင်း ပေါ့လေ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ၅၀၀၀တန်ဖုန်းရယ်လို့ မကြားဖူးတာ။ ကိုယ်တို့နိုင်ငံလည်း ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ
သမီးစံ January 29, 2012 at 9:23 PM
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ အာကာမိုးနိုင်Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ January 29, 2012 at 10:49 PM
သမီးစံ January 30, 2012 at 4:06 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 29, 2012 at 11:03 PM
အားတော့ မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ ...:):)
သမီးစံ January 30, 2012 at 4:08 PM
Anonymous January 29, 2012 at 11:32 PM
တယ်သွက်နေပါလား တစ်ခုချင်းစီးလိုက်ပြန်ရေးနိုင်တယ် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကို စိတ်နာလို့ ထင်တယ် နာေ၇ွးကောက်ပွဲဝင်မယ် နင်မဲထည့်မလား စံစံ
သမီးစံ January 30, 2012 at 4:09 PM
ကိုရင် January 30, 2012 at 3:46 AM
ရခါ နီးပြီ ရခါ နီးပြီး..
သမီးစံ January 30, 2012 at 4:11 PM
ကိုသက်ဝင်း January 30, 2012 at 11:16 AM
ဘိလပ်မြေက နိုင်ငံခြားက မှာရမှာ..
မြန်မာပြည်က ကွာလတီ မကြိုက်လို့လေ
ကျောက်စရစ်ခဲက ပင်လယ်ကြီးထဲ ဆင်းကောက်ရမှာ...
သဲက အခု စင်ကာပူကို ရောင်းလိုက်လို့ ကုန်နေတယ်
တာဝါတိုင်လေး တစ်တိုင်လုပ်ဖို့ကိုတောင် ၁ နှစ်လောက်ကြာမှာကို...
တာဝါတိုင် ၂၀၀၀ ကျော်ဆိုတော့
နှစ် ၂၀၀၀ လောက် ဆိုရင်တော့ ရပါပြီ။
သမီးတို့ရေ ဇွဲ မလျှော့နဲ့...
ကြိုးတွေ ၀ယ်ဖို့ကို ဆက်ပြောပြမယ်နော်... :P
သမီးစံ January 30, 2012 at 4:13 PM
မဒမ်ကိုး January 30, 2012 at 12:10 PM
ဟင်းးး ခွေးဝမ်းသာအောင် လေခနခနလည်ပြနေကြသလိုဘဲဟေးး
သမန်စီးလေးလက်မြန်ချက်ကတော့ ရှယ်ဘဲး)
သမီးစံ January 30, 2012 at 4:15 PM
blackroze January 30, 2012 at 11:55 PM
cool emerald January 31, 2012 at 9:21 AM
ဆင်းကဒ် ဖိုးပဲ ပြောပြီး လိုင်းကြေးနဲ့ပြောဆိုခ မှ ထည့်မပြောတာ...
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... ဆင်းကဒ်ဖိုး ငါးထောင်ပဲပေး... လစဉ်ကြေး က သုံးသုံး မသုံးသုံး တစ်လ အနဲဆုံး တစ်သိန်းနဲ့ နှစ်နှစ်စာ ဆိုရင်... ဟား ဟား...
မိနစ်ပို ရင် တစ်မိနစ် ဘယ်လောက်ဆိုတာလဲ ရှိသေးတာပဲ ဟာ...
စောင့် ကြည့်ရဦးမှာပါ.. အကောင်း နဲ့ အဆိုး တွေကို...
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိလိုင်း၊ လက်ရှိ စနစ်က ကျေနပ်လောက်စရာ မရှိဘူး ဆိုတာ နိုးနိုးကြားကြား ဖြစ်သွားတာ ကောင်းပါတယ်
ဘိုဖြူ January 31, 2012 at 5:59 PM
အလင်းသစ် February 1, 2012 at 9:25 PM
လာမှာပေါ့ ညီမလေးရယ်... စိတ်ရှည်သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ့...
₭Ǿ2 February 4, 2012 at 8:14 PM
သူဟာလည်း ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ချစ်တဲ့ ကောင်မလေး လိုပဲ မျှော်လင့်ချက်တွေပေး ... ခံစားချက်တွေပေး .. ရင်ခုန်မှုတွေပေးပြီး..ရင်တုန်မှုတွေပေး.. အိမ်မက်တွေပေးပြီးတော့ နောက်ဆုံးတော့ ချစ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ အဖြေပဲရခဲ့တယ် ရင်နာတယ် အဟင့်! ဟင့် ! ... :D
Anonymous October 31, 2012 at 5:12 PM
မလေးရှား လာခဲ့ပါ ၁၀ကိုင်လို့ရတယ် ဟင့်.......................သိပ်တော့မထူးပါဘူး